विद्या सापकोटा, (शंकरदेव कलेज काठमाण्डौं)
एक प्रफुल्ल प्रभात
सपनाको झुण्ड लिएर आयो
रङ्गहरुको शहर थियो
प्रेमको बस्ति थियो
स्पर्शको आभास थियो
ऊ थियो/म थिएँ
फूल थियो/ पात थियो
तर त्यसो भएन
सपनामा रङ्ग घोलियो
रङ्गमा मुटु चोपलियो
बिम्बहरु नजरभरी बास बस्न खोजे
पाइलाहरु हिउँका पहाड चढ्न लागे
आभासहरु आकाशको दुरी नाप्न लागे
अवयवहरु अन्जानी स्पर्शमा तरङ्गित हुन लागे
अरे ! म रोकिदैं थिएँ
खै के पो भयो
परिवेश शुन्य-शुन्य थियो
पराजयले गिज्याए झैं पनि लाग्यो
झिनो आश, ऊ सम्झाउन आउनेछ
हैन उसले मलाई हार्न दिनेछैन
त्यो पनि भएन
उल्टो झझल्कोको आगमन भयो ॥
यो त झन् पहिरो जस्तो हुदोरहेछ
न त रोक्न सकिने/न त समेटिनै सकिने
टुप्पोदेखी फेदसम्म ॥
मैले प्रष्ट पारें
ती बेरुजु सपना
केहीसँग मेरो सरोकारै छैन
अनागतसँग पनि खासै आस्था छैन
बस् म छु/आगत छ………।
बरु यो त धमिरा जस्तो हुदोरहेछ
यो मुटुदेखी त्यो मुटुसम्म
यो मनदेखी त्यो मनसम्म ॥
मैले त गाली गरेकै हुँ
दर्भाग्य ! भनेको के नै भयो र
हल्लाइदिन्छ मनका हाँगाहरु
समात्न खोज्छु स्वरुप छैन
छाम्न खोज्छुआकार छैन ॥
केही नहुनुको सत्यतामा
अब कतै दुखेको छैन
छ त एक मापाहा झझल्को
र यही हुर-हुर बलेको छ
बेहिसाब जलेको छ…………… ॥